Iintengiso zeFroggy-Iintengiso zeFroggy
Amanyathelo alula okufaka iNzululwazi yeNtengiso
inkxaso January 22, 2021 January 22, 2021 Comments Off kwiManyathelo alula okufaka iNzululwazi yeNtengiso
Wonke umntu osomashishini kufuneka abeneqhinga lakhe kwezentengiso kunye nokunyusa. Ngokwesiqhelo, oosomashishini bahlala bekhangela ulwazi ngokwenza intengiso ngophando lokufunda amanqaku kunye neencwadi ezinxulumene neshishini okanye ishishini. Kwincwadi enomxholo othi "Impembelelo: I-Psychology of Persuasion", uGqr. Robert Cialdini utyhile iikhonsepthi ezininzi ezinxulumene nokukholisa. Kuyavela ukuba iindlela zokuthengisa ezijolise kwicala lezengqondo zibonakalisiwe ukuba zisebenza ngakumbi. Fumana amaqhinga okuthengisa isayikholoji yokunyusa ukuthengisa kwishishini lakho.
Marketing, UkuThengiswa kweNtengiso Iindaba zokuthengisa, izicwangciso zorhwebo, iindlela zentengiso, urhwebo online
Iingcebiso zokwandisa isicwangciso sentengiso kwishishini lakho
inkxaso January 22, 2021 January 22, 2021 Comments Off kwiiNgcebiso zokuPhucula isiCwangciso seNtengiso kwishishini lakho
Ekuqhubeni ishishini, iqhinga lokuthengisa lelona nqaku libalulekileyo. Kunokuthiwa isicwangciso esiliqili sentengiso sisitshixo ekuphumeleleni kwintengiso yemveliso. Ke ngoko, amanyathelo okudala isicwangciso sentengiso abaluleke kakhulu ekwandiseni ukusebenza kweshishini. Nangona kunjalo, umgangatho wemveliso nawo kufuneka uqwalaselwe kuba yindawo ebalulekileyo kwintengiso. Emva kokuba uqinisekise ukuba imveliso yakho ikumgangatho olungileyo, yenza isicwangciso esifanelekileyo nesisebenzayo sokuthengisa ukuze inkqubo iqhubeke ngamandla nolawulo.
ishishini, Marketing Iindaba zokuthengisa, izicwangciso zorhwebo, iindlela zentengiso, ishishini online
Ukuthengisa ngeWhatsapp: Isicwangciso sokunyusa ukuthengisa
inkxaso January 22, 2021 January 22, 2021 Comments Off kwintengiso yeWhatsapp: Isicwangciso sokunyusa ukuthengisa
Indima yemidiya yoluntu inenzuzo enkulu xa isetyenziselwa ukuthengisa. Okwangoku, ukuthengisa kwimidiya yoluntu kuyasebenza kakhulu ekuncedeni iindlela zokuthengisa zeshishini okanye kwinkampani. Kodwa into ekufuneka ithathelwe ingqalelo kukuba yonke imithombo yeendaba zentlalo ineempawu zayo.
Marketing, Social Media Marketing izicwangciso zorhwebo, IziNdaba zeMidiya yeNtlalo, amaxabiso entengiso eendaba zentlalo, Imithombo yeendaba yeNtlalo
Izinto ezibalulekileyo zeSazisi seBrand kufuneka uyazi
inkxaso January 22, 2021 January 22, 2021 Comments Off Izinto eziBalulekileyo zeSazisi soPhawu lweeNgcaciso ekufuneka uyazi
Ubume beBrand buhambelana nophawu, kwaye abantu bahlala belazi eli gama ukuxoxa ngophawu njengegama lemveliso. Nangona uphawu lwesazisi luyinto ebanzi kunaleyo. Ubume beBrand ngawo onke amalungu abumba uluvo lwabantu ngophawu. Izinto ezahlukeneyo kwisazisi sophawu lusetyenziselwa ukuhambisa umlinganiswa, ukuzibophelela, kunye nexabiso lemveliso ukuze yaziwe ngcono ngabathengi.
uhlobo uphawu lophawu, Isicwangciso sokuthengisa
Ukusetyenziswa kweMemor kwiNtengiso yeKhontenti
inkxaso January 22, 2021 January 22, 2021 Comments Off kusetyenziso lweMemes kuThengiso loMxholo
Ukusukela kwiminyaka embalwa edlulileyo, ukuthengisa umxholo kuye kwasetyenziswa ngokubanzi njengesicwangciso sentengiso segama. Enye yemisebenzi yokuthengisa umxholo enokuthi yenziwe yimemes. Ukusetyenziswa kwememes njengesixhobo sokuthengisa kuyaqala ukwenziwa ngokuhambelana nokutshintsha imikhwa yabathengi ekusebenziseni ulwazi kunye nokuzonwabisa.
Marketing, UkuThengiswa kweNtengiso ukuthengiswa kokuqukethwe, izicwangciso zorhwebo, iindlela zentengiso
Zazi izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zoMxube weNtengiso
inkxaso January 22, 2021 January 22, 2021 Comments Off kuZazi izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zoMxube weNtengiso
Nokuba imveliso okanye inkonzo yenziwe kakuhle kangakanani, ukuba awunakho ukuyithengisa, imveliso okanye inkonzo iyakuba lilize. Ukuthengisa kufuna isicwangciso esihle sokufezekisa iziphumo eziphezulu. Umxube wokuthengisa yingqokelela yezinto eziguquguqukayo zentengiso ezisetyenziselwa ukufezekisa iinjongo zentengiso kwintengiso ekujoliswe kuyo. Ngamagama alula, umxube wentengiso sisicwangciso esidibanisa imisebenzi yentengiso ngexesha elinye ukonyusa ukuthengiswa kweemveliso okanye iinkonzo.
Iimpazamo ezi-7 xa usenza uphawu lweMveliso
inkxaso January 22, 2021 January 22, 2021 Comments Off kwiimpazamo ezi-7 xa usenza uphawu lweMveliso
Uphawu lweMveliso ngumzamo wokunika isazisi kwimveliso enokuthi ichaphazele abathengi ukuba bakhethe imveliso kunenye imveliso ekhuphisanayo. Inkqubo yokwenza uphawu ayisiyo nje imveliso yophawu. Kodwa yonke into inxulumene nezinto ezibonakalayo zemveliso. Ukuqala kwilogo, iimpawu ezibonakalayo, umfanekiso, ukuthembeka, umlinganiswa, umbono, umbono, kunye nokucinga okusengqondweni yabathengi bezi mveliso.
Ukoyisa ukuThengisa ngeDijithali ngeNtengiso ye-4.0
inkxaso January 22, 2021 January 22, 2021 Comments Off Ukoyisa ukuThengisa ngeDijithali ngeNtengiso ye-4.0
Ihlabathi lentengiso lihlala liguquka. Ukuba ubuqhelene nentengiso ejolise kwimveliso ye-1.0 yexesha, ngoku ilizwe lentengiso liphuhlisiwe de kwaba lixesha lokuthengisa le-4.0. Ngaphambi kokuxoxa ngendlela yokoyisa intengiso yedijithali ngendlela yentengiso ye-4.0, siza kuqala sichaze umahluko phakathi kwentengiso ye-0.1 ukuya kwi-4.0.
Yandisa uMdla kubaThengi ngokuThengisa ngokuBonakalayo
inkxaso January 22, 2021 January 22, 2021 Comments Off ekwandiseni iNzala yaBathengi ngeNtengiso yeVidiyo
Intengiso ebonakalayo okanye into eyaziwa ngokuba yintengiso yokubonakalayo yindlela yokunxibelelana nophawu okanye imveliso usebenzisa imifanekiso, iividiyo, okanye enye imidiya ebonakalayo. Ukuthengisa okubonakalayo kunokusetyenziselwa ukwakha unxibelelwano ngokweemvakalelo kunye neendlela zabathengi ngendlela yobuqu, yokusebenzisana, kwaye ekugqibeleni kuncede ukuqhuba ukuthengisa. Amandla ezibonwayo aya kwenza intengiso yemveliso yomelele kwaye ingalibaleki. Kananjalo nokukwazi ukuguqula izinto ezingaphathekiyo zibe yinto ephathekayo, ukunceda abantu ukuba babone umyalezo wakho kunye negama lakho okanye imveliso ezingqondweni zabo.
Iindlela ezi-6 ezilula zokufumana impumelelo ekuqhubeni ishishini lefashoni
inkxaso January 22, 2021 January 22, 2021 Comments Off kwiindlela ezi-6 ezilula zokufumana impumelelo ekuqhubeni ishishini lefashoni
Ukwakha kunye nokuqhuba ishishini akukho lula. Uya kujamelana neengxaki ezahlukeneyo ezizayo. Kuthatha ukulungela okungakumbi kunye nesicwangciso esifanelekileyo ukwenza oku kwenzeke. Kwishishini, ewe, kuthatha into entsha kwaye kulandele ukukhula kweendlela ezikhulayo kwintengiso. Ukuba akunjalo, ishishini linokungabinamali.
ishishini ishishini online, Iingcebiso kunye namacebo
Malunga neeNtengiso zeFroggy
Siliqonga lokuthenga ngemidiya elidibanisa kuyo yonke imithombo yezithuthi ephezulu kwihlabathi liphela. Okwangoku sinabathengisi abakhutheleyo abangaphezu kwe-11,000 yonke imihla! Xa uthenga iselfowuni, ithebhulethi, usetyenziso okanye itrafikhi yedesktop kuthi Uya kufumana ubungakanani obuphezulu, ukuqhuba okuphezulu kunye nokukhuseleka kraca.
Intengiso yeShishiniInethiwekhi yentengisoIsikhokelo sokudibanaizikhokelo ezihambelana nazoIsikhokelo sokudibana twitch adc yakha lolIsikhokelo sokudibana twitch ad s9Isikhokelo sokudibanisa isikhombisi sehlathiIsikhokelo sokudibanisa jungle inkosi ye-mobafire masterIsikhokelo sokudibana jitch runes s9isikhokelo sokudibanaisikhokelo sokudibanaindibaniselwano yokuthengisa isikhokelo setafile zentlokoUmanyano lokuthengisa isikhokelo seengxaki zeetotshi ingcacisoIsikhokelo sokuthengisa esidibeneyo se990sisikhokelo sokudibanisa isikhokelo semibuzo engenzi nzuzoisikhokelo sokudibanisa isikhombisi esingenzi nzuzo kwi-intanethiisikhokelo sokudibana sikhokelo sokukhangela einisikhokelo sokudityaniswa kwesikhokhelo sezemali ukungena kwam kwi-lausdisikhokelo sokudityaniswa sikhokeloyenye imali ekhuselayoisikhokelo sokudibana sikhokeloongena kwiimaliUmgaqo-sikhokelo wokuthengisa osebenzayoUmgaqo-nkqubo wentengiso oliliso weenkonzo zomhlala-phantsiUmdibaniso we-twitch logo ye-gif imifanekisoIlogo yomanyano lwe-twitch alukho umva we-gifIntlawulo yokudibanaUmdibaniso womdibaniso womfanekiso png wendodaUmdibaniso wokudibanisa umfanekiso omhlophe wecarraraiimfuneko zokumanyanaIsikhokelo sokudibana kwesizaAmaqabane e-amazon agqibeleleyo isikhokelo pdfizikhokelo ze-amazon zokubuyisainto yokuphononongagooglesuggestrelevanceubhalisela njani ukudityaniswa kwamatyala ukuze ubhatalweumkhankaso wokuthengisaIindaba zokuthengisaizicwangciso zorhweboiindlela zentengisoishishini onlineurhwebo onlineIzikhokelo zentengiso ezihambelana nepinterest hdc2togIzikhokelo zentengiso ye-pinterest ehambelana nazo iitemplates ze-robloxIziNdaba zeMidiya yeNtlaloImithombo yeendaba yeNtlaloIingcebiso kunye namacebo
Umsebenzi wothungelwano lwentsebenzo